Pnpkhabar.com | Popular Nepali Portal भारतीय कलाकार सिद्धार्थ शुक्लाको निधन, उनको अन्तिम इन्स्टाग्राम पोस्ट भाइरल - Pnpkhabar.com
भारतीय कलाकार सिद्धार्थ शुक्लाको निधन, उनको अन्तिम इन्स्टाग्राम पोस्ट भाइरल
काठमाडौं, १७ भाद्र : भारतीय कलाकार सिद्धार्थ शुक्लाको निधन भएको छ । टीभी सिरियलका लोकप्रिय कलाकार तथा बिग बोस १३ का बिजेता सिद्धार्थको हृदयघातका कारण निधन भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । ४० वर्षका सिद्धार्थको कपुर अस्पतालमा निधन भएको खबरमा उल्लेख छ । सिद्धार्थले बुधबार राति सुत्नुअघि औषधि खाएर सुतेका तर बिहिबार बिहान उनको हृदयघातका कारण निधन भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
टेलिभिजन उद्योगका चर्चित अभिनेता शुक्लाले बिग बोसको १३ औँ संस्करण जित्न सफल भएका थिए । उनले टेलिभिजन सिरियल ‘बालिका बधु’ बाट आफ्नो पहिचान बनाएका थिए । उनले अभिनय गरेको बालिका बधु टेलिचलचित्र धेरैले रुचाएका थिए । उनको जन्म सन् १९८० को डिसेम्बर १२ मा भएको थियो । उनले सन् २००४ मा टिभीमा पहिलोपटक अभिनय गरेका थिए । उनले सन् २००८ मा ‘वह बाबुलका आंगन छुटे ना’ नामको सिरियलमा काम गरेका थिए । उनी ‘बालिका बधु’ बाट भने चर्चामा रहे ।
उनले टेलिभिजनसँगै बलिउडमा पनि कदम राखेका थिए । उनले​ २०१४ मा रिलिज भएको फिल्म ‘हम्टी शर्माकी दुल्हनिया’ मा काम गरेका थिए । सिद्धार्थ शुक्लाको निधनपछि बलिउड स्तब्ध भएको छ । कलाकारहरुले उनको निधनमा दुख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली दिइरहेका छन् । उनको निधन पश्चात उनको अन्तिम इन्स्टाग्राम पोस्ट भाइरल भइरहेको छ । उनले गत अगस्ट २४ मा तस्बिर सेयर गर्दै फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरुलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
उनले लेखेका छन्, ‘सबै अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरुलाई मनदेखि नै धन्यवाद । तपाईंहरु आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राखेर लामो समय काम गरेर बिरामीहरुलाई सहज जीवन दिने प्रयास गर्दागर्दै आफ्नो परिवारसँग रहन पाउनुहुँदैन । तपाईंहरु वास्तवमा महान हुनुहुन्छ ।’ उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘अग्रपंक्तिमा रहन सहज छैन । तर वास्तवमा तपाईंहरुको प्रयास सह्रानिय छ ।
थप सात सय ६४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएसंगै १० जनाको ज्यान गयो
रामकुमारी झाँक्रीलाई सहरी विकास मन्त्रालय, कसले पाए कुन मन्त्रालय ?
देउवा नेतृत्वको सरकार ८८ दिनपछि मन्त्रिपरिषद्ले पायो पूर्णता, को-को मन्त्री बने ? (सूचीसहित)
‘प्रतिनिधिसभाबाट निजामती सेवा विधेयक फिर्ता, प्रधानन्यायाधीशले भाग नमागेको स्पष्ट’
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच भेटवार्ता, आजै मन्त्रीहरूको शपथको तयारी
ओलीले तयार पारेकाे १८ पदाधिकारीको सूचीमा को-को नेता परे ?
आज बि.स.२०७८ साल मंसिर १२ गते आइतबारको राशिफल हेर्नुहोस्
बस दुर्घटना : ५ को मृत्यु, २७ जना घाइते
कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’  कति खतरा !
एमाले नेतृत्वमा रस्साकस्सी: बन्द सत्र बेलुका ७ बजे
एकै परिवारका तीन जना मृ त भेटिए
चितवनमा आगलागी, दुई बालबालिकाको मृ त्यु
भारतमा पनि देखियो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ‘ओमिक्रोन’
चुनौतीरहित छैन लोकतन्त्र, सबैलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ : सभामुख सापकोटा
एमाले महाधिवेशनः दबाब र आशाको केन्द्रमा अध्यक्ष ओली
कुटपिटबाट बझाङमा एकजनाको मृ त्यु
देशभर चिसो बढ्यो